Izindatshana zika-Alexander Frolov Martech Zone |
Imibhalo nge Alexander Frolov
NgoLwesibili, Novemba 30, 2021 NgoLwesibili, Novemba 30, 2021 Alexander Frolov
Ukumaketha kwe-Influencer sekuphenduke ingxenye ehamba phambili yanoma yimuphi umkhankaso womkhiqizo ophumelelayo, ofinyelela inani lemakethe lama- $ 13.8 billion ngo-2021, futhi lelo nani kulindeleke ukuthi likhule kuphela. Unyaka wesibili wobhubhane lwe-COVID-19 uqhubeke nokusheshisa ukuthandwa kokumaketha kwabanamandla njengoba abathengi behlala bethembele ekuthengeni ku-inthanethi futhi bekhulisa ukusebenzisa kwabo izinkundla zokuxhumana njengenkundla ye-e-commerce. Ngezinkundla ezifana ne-Instagram, kanye ne-TikTok yakamuva, zisebenzisa ukuhweba kwazo kwezenhlalo
Umkhankaso we- # GetVaccinated Uzuza Inhlonipho Eyinhloko
NgoLwesithathu, Okthoba 6, 2021 NgoLwesithathu, Okthoba 6, 2021 Alexander Frolov
Ngisho nangaphambi kokuba kugonywe umjovo wokuqala we-COVID-19 e-US ngoDisemba 2020, izibalo ezisezingeni eliphakeme kwezokuzijabulisa, uhulumeni, ukunakekelwa kwezempilo, kanye nebhizinisi zazincenga abaseMelika ukuthi bagonywe. Ngemuva kokuhluma kokuqala, noma kunjalo, ijubane lokugoma lehla njengoba imithi yokugoma yatholakala kakhulu futhi uhlu lwabantu ababekufanele ukuyithola lwakhula. Yize kungekho mzamo omkhulu ongaqinisekisa wonke umuntu ongagonywa ukuthi enze lokho, kukhona
Njengoba umhlaba uvela kulo bhubhane nemiphumela esalile ngemuva kwayo, ukumaketha okunomthelela, hhayi ngokungafani neningi lezimboni, kuzozithola sekuguqukile. Njengoba abantu bephoqeleka ukuthembela kokungokoqobo esikhundleni sokuhlangenwe nakho komuntu futhi bachitha isikhathi esiningi ekuxhumaneni nomphakathi esikhundleni sezehlakalo zomuntu uqobo kanye nemihlangano, ukumaketha okunethonya ngokuzumayo kuzithole sekuhamba phambili ethubeni lemikhiqizo ukufinyelela abathengi ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana ku inengqondo futhi iyiqiniso